नयाँ रणनीति : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइने, नेपाल पक्षका २० सांसदलाई उपचुनाव जिताइने - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com नयाँ रणनीति : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइने, नेपाल पक्षका २० सांसदलाई उपचुनाव जिताइने - खबर प्रवाह
नयाँ रणनीति : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइने, नेपाल पक्षका २० सांसदलाई उपचुनाव जिताइने
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवादले नेताका दौडधुप तीव्र बनेको छ ।
पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फकाउन गरेको प्रयास असफल भएपछि विवाद झन् बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदैछन् ।
आगामी ६ जेठमा हुने बाग्मती प्रदेश तर्फको राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुँदैछ । यी २ विषय केन्द्रित छलफल जारी छ ।
ओली आफूलाई विश्वासको मत दिनुका साथै उपनिर्वाचनमा नेपाल समूहले विना शर्त सहयोग गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
तर नेपाल समूह पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काएर नयाँ ढंगले अघि बढनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एमाले धेरै नै अघि बढिसकेकाले फर्किन नसक्ने अडान ओलीको छ ।
शीर्ष नेताको अडानबीच पार्टी एकता कायम राख्दै अघि बढ्ने विषयमा दोस्रो तहका नेता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । शुक्रवार ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमाल र नेपाल समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टबीच छलफल भएको छ ।
राष्ट्रपति शितल निवासमा प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बोलाएर भण्डारीले छलफल गरिसकेकी छन् । तर राष्ट्रपति साक्षी राखेर छलफल भए पनि कुनै किसिमको सहमति जुट्न सकेको छैन ।
‘हामी सिद्धान्तनिष्ठ, क्रान्तिकारी, नीति र विधिको आधारमा चल्ने सुदृढ र एकताबद्ध एमाले चाहन्छौं, किनकि यो हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो । यसका लागि वार्ता र लचकता दुवै अपनाउँछौं तर अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन,’ नेपालले आफ्नो फेसबूक पेजमा लेखेका छन्, ‘२०७७ फागुन २८ गते र तत्पश्चात् बसेका कथित बैठकहरू र त्यसले गरेका निर्णयहरू फिर्ता लिनुपर्छ र २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी, विधान र नेतृत्व नै हाम्रो बटम लाइन हो । यससम्बन्धमा कुनै किसिमको भ्रममा नपर्न, नअल्मलिन र सुदृढ र सशक्त पार्टी बनाउने महान् अभियानमा लागिरहन आह्वान गर्दछौं ।’
सहमति जुटाउन एक सातादेखि छलफल तीव्र छ । नेताहरूले दिनरात छलफल भइरहेको भए पनि कसरी मिलाएर अगाडि बढ्ने ? विषयमा ठोस सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन् ।
नेताबीच छलफल भइरहेकै बेला शुक्रवार साँझ उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल राष्ट्रपति भेट्न शितलनिवास पुगेका छन् । शितलमा हालसम्म भएका छलफलबारे जानकारी गाराउँदै पार्टी एकताका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल समूहले कांग्रेस, माओवादी र जसपाको सहयोगमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएपछि ओली समूह तनावमा छ । गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाउने निश्चित गरेको ओली समूहले अहिले कसलाई उम्मेदवार बनाउने ? भन्नेबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
देवकोटालाई विजयी बनाउन तथा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मत हाल्ने विषयमा देउवा, नेपाल, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच निरन्तर छलफल जारी छ ।
आफूविरुद्ध एमाले नेपाल समूह, देउवा, प्रचण्ड, जसपाको उपेन्द्र यादव सहितको संयुक्त गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली आत्तिएका छन् । नेपालसहित सो समूह नेतालाई गरिएको कारबाही तत्काल फुकुवा गरेर पूरा गर्नैपर्ने माग सम्बोधन गर्दै पार्टी एकता जोगाउन ओलीलाई सोही समूहका नेताले दबाब समेत दिइरहेका छन् ।
एमाले नेता ज्ञवाली, नेम्वाङसहितका नेताले ओलीलाई पार्टी एकता जोगाउन भन्दै आन्तरिक दबाब दिँदै आएका छन् । नेपाल समूहसँग मिलेर अघि बढ्दा तथा जसपाको ठाकुर, महतोसँग गठबन्धन गरेर पछि सरकार पनि जोगिने र पार्टी एकतासमेत जोगाउन सकिने मूल्यांकन यी नेताको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।